The Lenovo Legion ga-egosipụta ngwa ngwa 90W ngwa ngwa | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Lenovo, Mobiles, Noticias
Izu ole na ole gara aga anyị na-ekwu maka ya Nkwekorita nke Lenovo n’egwuregwu egwuru egwu, nke Lenovo Legion. Ekwentị ga-ada n'ahịa iji sọọ mpi n'ike na ịrụ ọrụ n'etiti ndị ahụ ebidola n'etiti. Ugbu a anyị amatala na ọ na-abịakwa stomping na ngwa ngwa Nchaji ngalaba, nke ọ dị ka ọ ga-enwe onye na-ama ya aka.
Lenovo, mgbe ọtụtụ asịrị dị na mgbasa ozi dị iche iche, gosipụtara na Lenovo Legion ga-egosipụta ngwa ngwa kachasị elu ngwa ngwa. A ngwa ngwa ụgwọ nke 90W Ọ nwere ike zuru batrị 4.000 mAh batrị na-erughị 30 nkeji. Ihe a na-apụghị ichetụ n’echiche ruo n’oge na-adịbeghị anya.
Lenovo Legion na ịgba ọsọ kachasị na ahịa
Otu n'ime Isi nsogbu na anyị na-ahụ na smartphones bụ oriri ike. Mgbe ọtụtụ afọ nke ọganihu dị mkpa na akụkụ ndị ọzọ dịka eserese, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na ndị nrụpụta dị ike karị, batrị bu ihe echefuru ebighi ebi. Smartphones ugbu a emeela ọtụtụ n'ime ikike batrị e jiri ya tụnyere nke afọ ndị gara aga. Ma mmụba a na batrị abịa aka na ikike dị elu dị elu site na ọnụ, ya mere, ọ bụghị chọpụtara na nkịtị were.
Ruo taa, enweghị ekwentị mkpanaaka nwere ike idowe anyị ihe karịrị otu ụbọchị na ọkara. A ga-enwe ndị na-agbagha nkwupụta a, ọ ga-ekwe omume, ebe ọ bụ na oriri batrị dabere na ojiji nke ọ bụla na-eji ngwaọrụ ha. Isi ihe bụ na Ekwentị ndị ahụ site na afọ iri gara aga batrị batrị karịa 5 ụbọchị dị ka ha agaghị alaghachi n'ihi ọtụtụ ihe. Ọ bụ ezie na a ka na-echefu mmepe batrị, ee ha na-arụ ọrụ na mmepe nke ụgwọ ngwa ngwa ka mma, ihe na-edozi nsogbu ahụ nke ọma.
Rute ugbu a, aha nke smartphone na ngwa ngwa kachasị ngwa ngwa bụ ụgwọ Oppo. A na-enye Super VOOC 2.0 ngwa ngwa ngwa ngwa ruo 65W. Ọnụ ọgụgụ ole na ole ogologo karịa 90W Lenovo kwadoro maka Lenovo Legion Gaming smartphone na nso nso a. More ihe na ihu ọma nke a egwu egwuregwu ama na-enweghị ukara tọhapụ ụbọchị site na nke anyị na-amụta ihe ndị na-adọrọ mmasị na-aghọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo Legion ga-egosipụta ngwa ngwa 90W
Gbalịa Google Stadia n'efu maka ọnwa abụọ ugbu a, osote!